Sekunjalo ngamaxesha amandulo, uluntu lwaluyazi ngemvubelo - ngamawaka eminyaka asetyenziswe ekuveleni nasiphi na utywala, ukuqala nge-ale kunye nokuphela kwe-whisky. Isisombululo esenzelwe ukuvelisa imvubelo singenziwa nasiphi na - i-apula, iidiliya, i-malt, hop, i-rye, ingqolowa, njl. Unako ukusebenzisa i-molasses, iifatata kunye nezinye iimveliso zokutya.
Ngokwakheko lwemichiza, imvubelo ayizinzile: kuxhomekeke kwimihlobo yayo kwininzi yesimo sayo. Ngomzuzu sele sele sele ihamba ngeenkulungwane zeesityalo. Kwakhona, ukubunjwa kuxhomekeka kakhulu kwimiba apho imvubelo iyanda khona. Ininzi kaninzi iqulethe ikota yomcimbi owomileyo kunye namanzi okuhluma. Umba owomileyo uquka izinto ezinjenge-carbohydrate, izinto ezingekhoyo, i-nitrogen, amafutha kunye nama-protein.
Izinto eziqhelekileyo zivame ukumelelwa yi-potassium kunye ne-phosphoric acid. Kwi-carbohydrate inxalenye yemvubelo, i-polysaccharides iqulethwe, kunye nakwiiprotheni, i-amino acid, ezibandakanya zonke izinto ezifunekayo; kumanqatha kunokufumaneka i-polyunsaturated kunye ne-acids fatty acids.
Iintlobo zemvubelo ziye zafunda ukuhlula ekupheleni kwekhulu leshumi elineshumi elinesithoba kunye neyokuqala: iingcali zenzululwazi ziye zaqhuba ezininzi iimvavanyo kunye nemisebenzi eminingi kule ngxelo ibhaliwe.
Phakathi kweentlobo eziphambili zemvubelo, ezisetyenziswayo namhlanje kumashishini athile, unokuthi igama elinjengexinzelelo, ukupheka, usebenze oomileyo, ubhiya, ngokukhawuleza, iwayini.
Indlela elula kukufumana imvubelo yeebhaki - ayithengiswa kuyo nayiphi na ivenkile yokutya, epakishwe kwiingxowa ezincinci; banexesha elide lobomi kwaye zilula ukusebenzisa - nokuba umntwana unokuzipheka ngesiseko.
Imvubelo egxiliweyo iyaziwa nangokuthi i-confectionery. Ziyinkimbinkimbi kakhulu kwisitoreji: ukuba zigcinwe ngaphandle kwefriji, emva koko emva kweiveki ezimbini aziyi kufaneleka ukusetyenziswa, kwaye ukuba iqondo lokushisa elingaphakathi lingama-degrees amathathu, ubomi be-shelf buncitshiswe kwiintsuku ezintathu ukuya kwezine. Kunconywa ukuba ugcinwe efrijini, Kuya kubakho ukugcina impahla yabo kwiinyanga ezimbini. Ngaphambi kokusebenzisa imvubelo, i-confectionery kufuneka ihlanjululwe ngamanzi afudumele.
Imvubelo eyomile inexesha elide lokuhlala kwiphepha xa ukupakishwa kwayo kungavulwa: kwindawo epholileyo epholileyo, ingalala ngamashumi amabini. Imvubelo evulekile idinga ukugcinwa kwisitya esivaliweyo esivaliweyo esibekwe kwifriji-ukuze zigcinwe malunga neenyanga ezine.
Imvubelo esebenzayo yomeleleyo kufuneka ichithe ngamanzi afudumele (enye inxalenye yesilingi kwiindawo ezine zamanzi), shiya imizuzu elineshumi, uze ugxininise kunye ncinane.
Imvubelo yokuqhawula ngokukhawuleza ibe neepropati ezifanayo kwaye zisetyenziselwa ngendlela efanayo, nangona zilungele ukusetshenziswa emva kwemizuzu elishumi kumanzi afudumele.
Iintlobo zonke ezikhankanyiwe ngasentla zingagcina umsebenzi wazo ixesha elide xa ziphantsi kokuqhwala, kodwa zingenzi ngokukhawuleza - ziyakhathalela utshintsho lwezitsholongwane ezibhubhisa iiseliti zesininzi, ukuze zitshintshwe kancane kancane, kwaye amanzi kufuneka atshiswe kancinci ukuze awanqothule.
Imvubelo yeBrewer iyahluke naleyo esetyenziselwa uvavanyo, kwaye kukho ezininzi. Kungenxa yesi sizathu sokuba ibhiya ezahlukeneyo zinemibala eyahlukileyo, ukunambitha kunye nezinye iimpawu. Ngokomzekelo, uEl uyenziwe ngemvubelo ekhethekileyo, engekho ngaphantsi komnxeba kunezinye iintlobo. Njengomthetho, imvubelo ye-brewer ikhona kwifom ye-liquid, ngenxa yesi sizathu, ngaphambi kokusetyenziswa, akufuneki ukuchithwa.
Kwakhona isiliso sisetyenziselwa ukupheka i-kvass, nangona kunjalo, kule meko, i-lactobacilli inxaxheba kwakhona kwinkqubo.
Amajuba asetyenziselwa ukudala iindim iinesampanethi ezahlukeneyo zineempawu eziphezulu zokuba khona phakathi kwendawo enomxholo ophezulu wokusela utywala kunye nokushisa okuphezulu apho ezinye izidumbu zifa ngokuqhelekileyo.
Kukho ezinye iintlobo zemvubelo ezingasetyenziselwa ukupheka ukutya okanye imvubelo yokutya: zihamba ngonyango lokushisa kwaye ziya kwiimeko ezingasebenziyo, kodwa iiseli zazo zihlala zilungele ngexesha elifanayo, ezinceda ukugcina amavithamini, iiprotheni nezinye izinto ezincedo. Kwiloo mivithamini eninzi, kwaye ungayithenga kumaSebe okunondlo olufanelekileyo kunye namayeza.
Iintlobo ezahlukeneyo zesambulo zisetyenzisiweyo namhlanje kumashishini ahlukeneyo: vkvasovarenii kunye nokuphuza, i-shishini - ngokuqhelekileyo kubhakabhaka, i-winemaking, ukuveliswa kwemveliso ethile yobisi, iyeza (njengemmeli yokukhusela kunye neyonyango), ukupheka.
Ijegi ziqukethe iivithamini ezininzi kunye namaprotheni aphakamileyo, ngoko ke iyakwazi ukudibanisa izitya ezahlukeneyo, kwaye iimvavanyo kulolu hlobo ziqhutywe kwi-yesithathu yokuqala yekhulu lemashumi mabini, kodwa lo mkhuba wawungasasazwa ngokubanzi. Kukho uluvo lokuba imvubelo inokungeniswa kwisobho, eluhlaza kunye nesomvusi isobho, i-rassolniki, i-borsch, i-white iluk sauces.
Impawu zokwelapha zemvubelo
Ukupheka kwendalo kunye nemvubelo ye-brewer ingasetyenziswa njengeyeza; kunye nokusetyenziswa kwazo, izidakamizwa ezikhethekileyo ezifana ne-hephephytin, echazwe kwizigulane ezinokukhathazeka kweenkqubo zentlungu, iingxaki zesikhumba, i-hypovitaminosis kunye nokuphazamiseka kwemizimba, zinokusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwazo.
Kwimeko yomlambo, imvubelo inokumiselwa yicandelo lezonyango lolawulo lomlomo ukwenzela ukwandisa ukutshatyalaliswa kwezidalwa ezizezondlo, ukuphucula ukusebenza kwesisu, amathumbu kunye neepancreas, ukuphucula ukukhuselwa komzimba kwizifo ezahlukahlukeneyo ezinokubangelwa ziintsholongwane kunye neebhaktheriya. Yaye isonka esilunxwemayo kule ndawo sinomdla ngakumbi kunomvubelo omile. Kwakhona, imvubelo inokumiselwa i-gastritis, i-enterocolitis, ukuphulukana kwizifo ezinzima. Ukuphathwa ngokuzimela ngokusetyenziswa kwemvubelo ayinqatshelwe ngokufanelekileyo - ugqirha kufuneka anikeze unyango.
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo ngesifo sohudo
Imifuno enamanzi ayakhula ekhaya
Yintoni umfana onokuyithetha kuye ukuba athande?
Izicathulo ezimnandi zasekwindla